कार्तिक ५, २०७७ ०४:१०:३५
आश्विन २, २०७७ बागमती खबर
प्रदेश राजधानी हेटौंडामा रहेको कोरोना प्रयोगशालाले गम्भीर लापरवाही गर्ने गरेको पाइएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका १० स्थित किट जन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा रहेको ल्याबमा कोरोना पिसिआर परिक्षण गर्ने गरिएको छ । तर ल्याबले मनोमानी ढंगले रिपोर्ट दिने गरेको पाइएको छ ।
ल्याबले दिने रिपोर्ट आधिकारिक होकी नक्कली भनेमा प्रश्न उब्जिएको छ । त्यो कसरि भने, बागमती प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालय अन्तर्गतको हेटौंडामा रहेको ल्याबले कोरोना परिक्षण गरेपछि दिने रिपोर्टमा हस्ताक्षरको दुरुपयोग र आधिकारिक रुपमा पुष्टि नहुने गरि रिपोर्ट दिने गरेको पाइएको छ ।
सुरुमा यो हेर्नुस । यसमा ३ जनाको हस्ताक्षर छ ।
माथिको रिपोर्टमा ३ जनाको हस्ताक्षर छ टक्नोलिजिस्ट सुमन सुबेदी, माइक्रोबायोलोजिस्ट राम इश्वर शाह र नारायण बहादुर कार्कीको । यसमा नारायण कार्की बागमती प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक समेत हुन् । तर कोरोना परिक्षण गरेपछिको रिपोर्ट दिदा यहा हुदै नभएका व्यक्तिको हस्ताक्षर गरिएको पाइएको छ । ल्याबको यति सम्म गैरजिम्मेवारपन र बदमासी देखिएको छ कि माइक्रोबायोलोजिस्ट राम इश्वोर शाह हेटौंडामा छैनन् तर उनको हस्ताक्षर रिपोर्टमा राखिएको छ ।
यतिमात्र हैन निर्देशक नारायण कार्कीले नै हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेका छन् । केहिदिन यता नारायण कार्की हेटौंडामै छैनन् तर उनको हस्ताक्षर भने हरेक दिनको रिपोर्टको तल देखिने गरेको छ । शाह केहिहप्ता अगाडी सम्म हेटौंडा कै ल्याबमा रहेका थिए । तर हाल उनि अन्तै गैसकेका छन् तर यहा उनको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गर्दै कोरोना परिक्षण गर्नेलाई उनको हस्ताक्षर भएको रिपोर्ट दिदै आइएको छ । त्यस्तै कार्की पनि प्राय हेटौंडामा हुदैनन् तर उनको हस्ताक्षर भने चलिरहन्छ ।
कोरोना परिक्षण होस् या जुनसुकै परिक्षण परिक्षण गर्दा होस् रिपोर्ट दिदा त्यो परिक्षण कसले गरेको हो सम्बन्धित व्यक्तिको आधिकारिक हस्ताक्षर कलमले गरेर दिनुपर्दछ । तर यहाँ ल्याबमै नभएको व्यक्तिको समेत हस्ताक्षर राखेर रिपोर्ट दिने गरिएको छ, जुन गैरकानुनि हो ।
यसले हेटौंडामा भएको प्रयोगशालाले दिने गरेको कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट सत्य हो कि हैन, आधिकारीक होकि हैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
यस सम्बन्धि जानकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा अधिवक्ताहरुले भने यो सरासर गलत काम भएको बताउछन् । यसरि रिपोर्ट दिदा अनिवार्य रुपमा हातले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा आफु नभएकै बेला आफ्नो हस्ताक्षर चलाउनु हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको एक अधिवक्ताले बागमतीखबर संग भने ।
त्यस्तै ल्याबले छाप नै नलगाई रिपोर्ट दिने गरेको छ । हेटौंडा स्थित ल्याबले परिक्षण पछी दिने गरेको रिपोर्टमा कुनैमा पनि छाप लगाइदैन । यसरि कुनै छाप नै नलगाई दिएको रिपोर्ट कत्तिको आधिकारिक हुन्छ ? तपाई आफै अनुमान लगाउनुहोस ।
छाप नलगाई रिपोर्ट दिदा कोरोना बिमा गरेकालाई अझै सास्ती हुने गरेको छ । बिमा कम्पनीहरुले छाप नलगाएको रिपोर्ट मान्य नहुने भन्दै फर्काएको धेरैले गुनासो गरेका छन् । यो ल्याबको निकै गैर जिम्मेवारपन हो ।
यसरि हस्ताक्षर कै दुरुपयोग गरेर हेटौंडामा कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट निकाल्ने गरिएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार र लापरवाही गर्नेलाई कारवाही कसले गर्ने ? सम्बन्धित निकायको यतातिर नजर परोस ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, आश्विन २, २०७७, ०९:०९:००